Maitiro ekugadzirisa kukanganisa 29 mu iTunes | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa kukanganisa 29 mu iTunes
Kana tiri kuenda dzifambirane kana kudzorera iPhone yedu pamwe iTunes, chekupedzisira chinhu chatinoda kuona meseji yekukanganisa inotitadzisa kuenderera nekumisikidza. Pane zvakawanda zvakakanganiswa uye zvimwe zvinogona kugadziriswa nechimwe chinhu chakareruka sekumirira maawa mashoma kuti maSeva eApple ave akasununguka, senge pazuva rekutanga renyowani vhezheni yeIOS. Asi pane zvimwe zvikanganiso izvo zviri kutonyanya kunetsekana, nekuti zvinogona kureva kuti iPhone yedu yakanganisika. Imwe yeiyi mhosho ndeye kukanganisa 29.
Tichaona iTunes kukanganisa 29 kana paine zvinetso zvemidziyoPamwe ndezvechokwadi kana iyo system iri kuzviona zvisirizvo. Zvimwe zvikanganiso zvatichaona izvo zvine hukama zvakare neye Hardware ndizvo zvikanganiso: 1, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37 , 40, 53, 56, 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667 kana 1669.
1 Maitiro ekugadzirisa kukanganisa 29 mu iTunes
1.1 Gadziridza komputa yako software
1.2 Shandisa imwe chiteshi che USB
1.3 Iyo tambo iri mune yakaipa mamiriro
1.4 Edza imwe komputa
1.5 Dzosera kubva ku iPhone
1.6 Bata Apple
Gadziridza komputa yako software
Kuti zvese zvishande sezvazvinofanira, isu tinogara tichifanira kuve nechokwadi chekuti tiri kushandisa yazvino vhezheni yesoftware nekudaro unofanirwa gadziridza iTunes. Panyaya yeTunes, izvi zvinotonyanya kukosha kana zvichikwanisika, saka chinhu chekutanga chatichaita kuenda kuMac App Store uye tarisa kana tiine chero zvigadziriso zvakamirira. Kana paine chero, kunyangwe isiri yeTunes, tinoiisa.
Zvine musoro, kana isu tine chengetedzo sisitimu, senge firewall kana antivirus, isu tinofanirwa kuimisa kuitira kuti tendera iTunes kutaura neApple maseva. Izvi zviri kukutenderai mese kupinda uye kubuda kwehukama.
Shandisa imwe chiteshi che USB
Zvinoratidzika kunge zvakapusa, asi hazvisi, kure nazvo. Dzimwe nguva, chero chikonzero, chiteshi che USB chiri kupa matambudziko uye kukundikana kunogadziriswa nechiratidzo chiri nyore sekutora uye isa tambo mune imwe chiteshi. Ndinoziva kuti haina chekuita nazvo, asi kuita uku kwakandibvumidza kupaza jereza yangu iPad. Izvi zvakafanana zvinogona kuitika neTunes.
Iyo tambo iri mune yakaipa mamiriro
Imwe mukana ndeyekuti tambo yedu iri mune yakashata mamiriro. Zvinogona kuita kuti ubhadhare iyo iPhone uye unowirirana ne iTunes, asi hazvigoneke kudzoreredza kana kugadzirisa nekuti inoona kuti pane dambudziko. Kana iwe uine imwe tambo, edza kuti uone kana ichigadzirisa iko kukanganisa.
Edza imwe komputa
Chinhu chinotevera chatichaita kuedza imwe komputa, iyo yatinoziva inoshanda nemazvo, kana zvichibvira. Izvi hazvireve kuti komputa yedu yakaputsika, asi kuti iTunes yedu, yedu iPhone kana zvese panguva imwe chete zviri kuona dambudziko rinovatadzisa kuenda kumberi.
Dzosera kubva ku iPhone
Kana iwe waedza zvese uye uchiramba uchiona kukanganisa 29, unogona kuedza dzosa kubva ku iPhone. Izvi unogona kuita uye nekudaro tichava nechokwadi chekuti hapana software software pane yedu iPhone iyo inotitadzisa isu kuenda kumberi.
Kana pasina chimwe cheizvi chapfuura chakakwanisa kuita kuti mhosho 29 mesei inyangarike, bata Apple kuronga musangano uye kuti iPhone yako igadziriswe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa kukanganisa 29 mu iTunes
Ini handibvumirane zvakanyanya neichi posvo, Mhosho 29 ndeye chete uye chete nekuti iwe wakachinja bhatiri pane yako iPhone uye iyo APN yebhatiri iri rakasiyana nebhatiri rekutanga, ndinodaro uye ndinosimbisa kubva pane zvangu ruzivo….
ndine hurombo, ini ndatoedza zvese kuvandudza yangu iPhone iTunes, hazvindibvumidze kuti ndibatidze kana kuita chero chinhu. Kana ndichiedza kuimutsiridza nekombuta yangu, ndakawana kukanganisa 1671 uye hapana chakafambira mberi….
Hapana akagona kundibatsira.
Ini ndato gadziridza iyo inoshanda sisitimu yemakumbo angu, uye zvese zvakamirira kugadziridzwa.
Ini handidi kudzoreredza yangu iPhone nekuti ini handina kumbobvira negadziriro yeparutivi yangu data uye ini handidi kuirasa!
Ndokumbirawo mubatsire !!
Panguva ino iyo iPhone inoita imwezve kuyedza kuzvivandudza, apo zvinoita sekunge iri kuzopedzisa kumisikidza iyo yakandipa kukanganisa 29 !!
saka mhinduro iriko ?? BATSIRA !!!
Ndachinja bhatiri, 🙁
Pindura kuna Aktu
Pereiro Consuelo akadaro
Mhoro! Izvo zvakaitika kwandiri, uye hazvigone kugadziriswa = ???? hauna kukwanisa kuzvigadzirisa ???
Pindura Pereiro Consuelo
Ini ndinotsanangura chiitiko changu, musi waAugust 19, 2016 ndakachinja bhatiri reangu 4 Gb iPhone64S.Pana Nyamavhuvhu 27, mazuva masere gare gare ndakagadzirisa iyo iOS kuita 8 uye yakandirova, iTunes yakandiudza kukanganisa 9.3.5, ndakazvitora ini ndakaenda kuchitoro cheApple uye mushure memasikati ndichiedza kugadzirisa iyo iPhone29S vakaidzorera kwandiri vachiti ndichatenga imwe nyowani yaive dambudziko reboardboard, musi waGunyana 4 uye mushure mekuverenga iyi webhusaiti, ndakavhura yangu iPhone18S, ndakaisa iyo bhatiri rekutanga iro ini ndakanga ndichiri kusaziva kuti nei uye "voila" kekutanga iTunes ikandivandudzira uye inoshanda kwazvo. Ndinokutendai mose nekuda kwemashoko enyu. kwaziso kubva kuna Xavi.
Pindura kuna Xavi Pérez
Mhoroi, Pinxo. Sezvaunoziva, bhatiri iri Hardware. Uye zvakare, pawebhusaiti yeApple inotsigira inotaura zvakajeka https://support.apple.com/es-es/HT204770 tinya pane 29 uye wozvitarisa.
Pinxo inofanira kunge iri chokwadi nekuti ini ndakachinja bhatiri uye nzira chete yandaifanira kuidzosa kuhupenyu yaive nekuisa yekutanga bhatiri pairi, iyo kunyangwe iyo yainge isisachachaji zvakanaka yaindibvumidza kuti ndiyibatidza uye kudzorera bhatiri idzva mukati .
Adel Cruz akadaro
Ingo isa rimwe bhatiri rekutanga iro rakanaka risiri replica, batanidza netambo yakavimbika uye usb port zvakafanana, dzosera ne iTunes uye voila dambudziko rakagadziriswa 🙂
Pindura adel Cruz
Maita basa hama ndinokudai bastard muri tenzi ndatenda kwamuri ndakwanisa kupora yangu iphone 4s ndinokudai super bastard ndatenda bhiriyoni
Antonio Gomez akadaro
Ndatenda kwazvo nekuda kweichi posvo.Chokwadi, kukanganisa 29 kunokonzerwa nebheteri kutadza kwete nekuti ndeyako kana kwete, asi nekuti rimwe bhatiri rinounza kutadza ikoko Kana akakupa, tora chikwereti kana kutenga imwe uye ndizvozvo.
Pindura kuna Antonio Gomez
Jose Lattuf akadaro
Haa, ndine dambudziko irori uye haridi kundishandira. Chinja bhatiri kubva parakapihwa nemwana wangu, handina rimwe bhatiri.
Pindura kuna Jose Lattuf
tsvaga iyo yekutanga yemhando imwechete yesero uye iyo ichakushandira iwe, asi chaiyo yekutanga
Chipgate yakadzikiswa. Ese ma iPhone 6s akafanana
NewsOfTheWorld inomutsa Apple News kumatunhu ese [Jailbreak]